Burma Partnership » Uncategorized
Uncategorized (70 found)
Media Advisory:“လူမသိသူမသိဘ၀များ – မြန်မာနိုင်ငံမှ လူမသိသေးသော နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရမှု သံသရာ” အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ခြင်း။
လေးစားရပါသော မီဒီယာမိတ်ဆွေများရှင့်/ခင်ဗျား “လူမသိသူမသိဘ၀များ – မြန်မာနိုင်ငံမှ လူမသိသေးသော နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရမှု သံသရာ” အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ခြင်း။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဘားမားလင့်ခ်၊ မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ နှင့် မွန်ပြည်လူ့အခွင့် အရေးဖောင်ဒေးရှင်း တို့မှ “လူမသိသူမသိဘ၀များ – မြန်မာနိုင်ငံမှ လူမသိသေးသော နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရမှု သံသရာ” ဟု အမည်ပေးထားသည့် အစီရင်ခံစာအသစ်အား ထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ပိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက် နေထိုင်နေကြသော ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရသူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ အထူးသဖြင့် မွန်တိုင်းရင်းသားများ၏ ဆက်လက်စိုးရိမ်ပူပန်နေရမှုများအား အလေးပေးဖော်ပြထားပါသည်။ လတ်တလော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ယင်းအရှေ့တောင်ပိုင်းမှ အိုးအိမ်စွန့်ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခရောက်ရမှုများ၏ အကြောင်း တရားများကို အလုံအလောက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးသည်ကို ဤအစီရင်ခံမှ တွေ့ရှိထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် […]
August 6, 2016 • Read more ➤
You are cordially invited to attendapress conference to launchanew report “Justice Delayed, Justice Denied,” by the Kachin Women’s Association Thailand and Legal Aid Network, on the one year anniversary of the rape-murder of two Kachin teachers in northern Shan State on January 19, 2015. Based on interviews with local witnesses, the […]
January 18, 2016 • Read more ➤
Media Advisory: A Launch of the Report, ‘Election for Ethnic Equality? A Snapshot of Ethnic Perspectives on the 2015Elections’
On9October 2015, Burma Partnership will launchareport titled Elections for Ethnic Equality? A Snapshot of Ethnic Perspectives on the 2015 Elections at the Royal Rose in Rangoon, Burma. Written by Burma Partnership’s Progressive Voice Policy Research Project, the 69 page report givesasnapshot of ethnic communities’ and ethnic political parties’ views […]
October 5, 2015 • By Burma Partnership • Read more ➤
UPR Info, and the Burma-Myanmar UPR Forum, co-led by Aung Myo Min, Executive Director of Equality Myanmar, and Khin Ohmar, Coordinator of Burma Partnership, would like to invite you toaLecture “Voices from the Ground: Burmese Human Rights Defenders engaging in Myanmar 2nd Cycle UPR to improve the Human Rights Situation on the ground”, […]
September 7, 2015 • By UPR-Info • Read more ➤
Media Advisory: The Important Role of the Media in Myanmar 2nd Cycle Universal Periodic Review (UPR)
One of the key mandates of the UN Human Rights Council is to undertakeaUniversal Periodic Review (UPR), on the fulfillment of each States human rights obligations and commitments. The UPR is thereforeaunique human rights mechanism and an important political process for advancing the realization of human rights on the ground. Myanmar […]
August 31, 2015 • By UPR Info and Equality Myanmar • Read more ➤